Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta, White, Zidane, Skriniar, Palmeri, Giroud, Puig
HomeWararka CiyaarahaWararka Xanta Suuqa Kala iibsiga ee Maanta, White, Zidane, Skriniar, Palmeri, Giroud, Puig
December 2, 2020 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United, Tottenham Hotspur iyo Chelsea ayaa isha ku haya daafaca reer England ee Brighton Ben White, oo 23 jir ah (Sky Sports)
Barcelona ayaa ku raad joogta daafaca kooxda Arsenal ee Shkodran Mustafi oo 28 jir ah iyo daafaca kale ee reer Germany ee kooxda chelsea ee Antonio Rudiger oo 27 jir ah (Mundo Deportivo – in Spanish)
Arsenal iyo Tottenham ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo xiiseynaya ciyaaryahanka khadka dhexe ee Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai, oo 20 jir ah, iyadoo RB Leipzig, AC Milan iyo Atletico Madrid ay sidoo kale isha ku hayaan ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Hungary. (Eurosport)
Spurs ayaa weli xiiseyneysa daafaca Inter Milan iyo Slovakia Milan Skriniar, 25, inkasta oo wadahadaladii u dhaxeeyay labada koox ay burbureen xagaagii. (Kubadda Cagta)
Maamulka Real Madrid ayaa sugi doona sida ay kooxdu u falceliso ka hor inta aysan wax go’aan ah ka gaarin mustaqbalka tababare Zinedine Zidane, ka dib guuldaradii 2-0 ee Champions League ee Shakhtar Donetsk. (Marca)
Manchester United , Manchester City iyo Chelsea ayaa ku tartami doona saxiixa Borussia Monchengladbach iyo qadka dhexe ee Switzerland Denis Zakaria, 24, bisha Janaayo. (Xiddig)
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Barcelona Riqui Puig oo 21 jir ah ayaa loo ogolaan doonaa inuu amaah ku baxo bisha Janaayo, waxaana xiddiga heerka caalami ee xulka Spain U21 loo soo bandhigay Leeds United, RB Leipzig iyo Monaco . (Eurosport)
Juventus ayaa isku diyaarineysa inay laba dalab ka gudbiso daafaca bidix ee reer Italy Emerson Palmeri oo 26 jir ah iyo weeraryahanka reer France Olivier Giroud oo 34 jir ah. (Il Bianco Nero – oo Talyaani ah)
Barcelona ayaa si gaar ah farta ugu fiiqday daafaca Atletico Madrid iyo Brazil Felipe Augusto, oo 31 jir ah, si ay bedel ugu noqoto Gerard Pique, oo 33 jir ah, iyadoo ciyaaryahanka reer Spain uu maqnaan doono xilli ciyaareedkaan. (AS – Isbaanish)
Si kastaba ha noqotee, Barca wax go’aan ah kama gareyso saxiixyada illaa iyo inta laga dooranayo madaxweynahooda cusub 24ka Janaayo – iyadoo siineysa toddobaad keliya inay ku xirto wax walba oo ay la soo wareegeyso daaqadda soo socota. (Ciyaaraha)
Rangers muuqan filayaa inuu seego on Wakiilka ciyaaryahanka khadka dhexe ee English Jack Wilshere, 28, iyadoo u qalmay hadda ay guushu ku wakiilka si xor ah u soo laabto Arsenal . (Cadceed)
Gunners ayaan weli wax dalab ah ka gudbinin ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Norwich City Emi Buendia, oo 23 jir ah, inkastoo ciyaaryahanka reer Argentine uu ka mid yahay dooqyada ay doonayaan bisha Janaayo. (Kubadda Cagta London)
Xayiraadaha saaran kooxaha Premier League iyo EFL ee magacaabaya maamuleyaal ajaanib ah ayaa imaan doona bisha Janaayo – waxayna ka hor istaagi lahayd Manchester United inay magacowdo Ole Gunnar Solskjaer. (Times – rukunka kaliya)
Ajax iyo goolhayaha reer Cameroon Andre Onana, oo 24 jir ah, ayaa weli rajeynaya inuu udhaqaaqo koox Premier League xagaaga soo aadan ka dib markii Tottenham iyo Chelsea ay qaboojiyeen xiisahooda. (Boostada)
Daafaca reer France Jean-Clair Todibo, oo 20 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu ku laabto Barcelona ka dib markii uu ku guuldareystay inuu hal daqiiqo ciyaaro intii uu amaahda ku joogay Benfica . (Abola – Boortaqiis)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Arsenal Patrick Vieira, haatana ah tababaraha kooxda Nice ayaa doonaya inuu keeno daafaca Gunners iyo xulka France U20 ee William Saliba, 19. (Metro)